Kuze kube manje, sengiqalile (kepha angikaze ngiqede) inqwaba yezinhlelo zebhizinisi zakudala. Uyazi… ukuhlukahluka okunothile ngamakhasi angama-25. Ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi nginezinhliziyo ezilunge kakhulu noma anginasineke kakhulu noma zombili. Ngakho-ke ngivame ukukuphakamisa nje “ngohlaka lwebhizinisi”, kodwa ngasese ngifisa ukuthi ngabe ngithole isikhathi sokubala imigwaqo yami yesikhathi eside nesifushane ngokuningiliziwe.
Ngezansi uzothola inguqulo ebhangqwe phansi. Kubuye futhi nomhlahlandlela weTactical ongumngane, ongatholakali lapha. Inamanzi kakhulu.